‘खुर्सानी र आलुमा बढी विषादी’ - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, आषाढ १५, २०७१
‘खुर्सानी र आलुमा बढी विषादी’
काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा ४ असारबाट गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालाबारे बाली संरक्षण निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत दिनेशबाबु तिवारीसँग गरिएको कुराकानीः
विषादी परीक्षण प्रयोगशाला किन आवश्यक पर्‍यो ?
बालीनाली लगाउँदा रोग नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने कीटनाशक विषादीको निश्चित अवधिसम्म असर रहन्छ । विभिन्न अध्ययनहरूले त्यस्ता विषादीले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएका छन् । खाने तरकारीमा विषादीको मात्रा छ कि छैन तथा कति छ भनेर पत्ता लगाउन प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो ।
परीक्षण गर्दा विषादी प्रयोग भएको पाउनुभयो ?
कालीमाटीमा बेच्न लगिएको तरकारीमध्ये पनि खुर्सानी र आलुमा बढी विषादी पाइएको छ । विषादी ३५ सम्म हुनुपर्ने खुर्सानी र आलुमा ८०–९० सम्म भेट्टिएको छ ।
विषादी परीक्षण मात्रै गर्ने हो कि कारबाही पनि गर्ने ?
हामी परीक्षणकै क्रममा छौं । अहिले कार्यविधि बन्दैछ । नमूना कसरी संकलन गर्ने र कति मात्रामा गर्ने भन्ने तय गर्न कार्यविधि आवश्यक छ । विषादी प्रयोग गर्नेहरूलाई कार्यविधिले व्यवस्था गरे अनुसार कारबाही हुन्छ ।
विषादीको प्रयोगमा किसानलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले के गर्छ ?
सबै किसान शिक्षित नभएकाले शुरुमा उनीहरूलाई विषादी प्रयोगबाट हुने बेफाइदाबारे जानकारी दिन्छौं । रोग नियन्त्रणका लागि विषादीलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा लिन आग्रह गर्छौं । बलजफ्ती गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।
प्रयोगशाला कालीमाटीमा मात्रै राखेर पुग्छ ?
प्रयोगशाला अहिले आफैं परीक्षणमा छ । यो सफल भएपछि काठमाडौंका अन्य भाग र देशका विभिन्न भागमा स्थापना हुन्छ । त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता विपरीत विषादी प्रयोग भएको तरकारी उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न रोकिन्छ ।